China KLT-10000LED abavelisi kunye nababoneleli |Kuqaqambe ngakumbi
Isixhobo sokuLayisha seSemi-automatic
Umthombo wokukhanya oxutyiweyo
I-Hydraulic Mast ● Izibane ze-LED ● Iinqaba zokukhanya
Inqaba yokukhanya ehambayo ephuhliselwe ngokukodwa izicelo zemigodi.Ndiyabulela kwi-6X4000W yezibane zayo ze-LED, i-KLT-1000LED inikezela ngokukhanya okuphezulu kakhulu kunye nazo zonke izibonelelo zesibane se-LED.Ezo zibonelelo ziquka ukuqina kunye nokugcinwa okuphantsi ngenxa yokungabikho kweglasi kunye nezibane zokukhanya.Itanki enkulu yamafutha kunye ne-injini yokusebenzisa amafutha aphantsi zityhala izithuba zepetroli zibe ngaphezulu kweeyure ezingama-90 zokusetyenziswa.
Thumela i-imeyile kuthi Khuphela Incwadi
Inqaba yokukhanya ye-KLT-1000OLED
I-KLT-1000LED ixhotyiswe ngesilawuli sedijithali esifundwe ngokukodwa ukulawula yonke imisebenzi yenqaba yokukhanya ukuze kube lula ukuyisebenzisa.
Izibane ze-LED ezikhanyayo
I-6x400 W izibane eziphezulu ze-LED ezisebenza kakuhle ziyilwe yi-Fuzhou Brighter Electromechanical Co, Ltd. Imodeli enezinga eliphezulu lokukhanyisa kuluhlu Njengokhetho, izibane zesikhukula zinokuthi zinikwe amandla nge-24 Volts ukwandisa ukhuseleko lomatshini.
Imasti yeteleskopu ethe nkqo enenkqubo yokuphakamisa ihydraulic kunye nobude obuphezulu be-9 yeemitha.
Khetha imodeli yenjini oyithandayo phakathi kweKubota D1105 kunye neD905.
Iimpawu eziphezulu ezifana nesakhelo esinzima, i-trailer yendlela yokuzikhethela kunye ne-anti-breaking LED floodlights yenza i-KLT-100OLED inqaba yokukhanya ibe yimodeli efanelekileyo ngokufanelekileyo kwiindawo ezinzima njengeendawo zemigodi.
1. Ngaba uyifektri okanye inkampani yokurhweba?
Siyifektri kwaye sivelisa zonke iimveliso ngokwethu.Wamkelekile kwinkampani yethu yokuhlolwa kwefektri.
2.Ngaba sinokuba neLogo yethu okanye igama lenkampani ukuba liprintwe kwiimveliso zakho okanye iphakheji?
I-Sure.your Logo inokuprintwa kwiimveliso zakho ngokugximfizwa okushushu, ukuprinta, ukuEmbossing.
3.Ingaba yiarhente yethu njani?
Logama unezibonelelo zentengiso kunye namandla okwenza inkonzo emva kwentengiso, qhagamshelana nathi ngeenkcukacha ezithe vetshe ngokusithumelela umbuzo.
4. Ndingayifumana isampula yomyalelo weemveliso zenqaba yokukhanya?
Ewe, siyakwamkela isampula ukuze uvavanye kwaye ujonge umgangatho.Iisampulu ezixutyiweyo zamkelekile.
Ukubona okanye uku-odola i-KLT-10000LED, fowunela 86.0591.22071372 okanye undwendwele www.worldbrighter com
Ubuncinci bemilinganiselo 3400×1580×2360mm
Ubukhulu bemilinganiselo 3400×1850×8500mm
Ubunzima obomileyo 1960kg
Inkqubo yokuphakamisa I-Hydraulic
Ukujikeleza kwemasti 360 °
Izibane amandla 6×400W
Uhlobo lwezibane I-LED
Ilumen iyonke 360000lm
indawo ekhanyisiweyo 6000㎡
Injini Kubota D1105/V1505
Ukupholisa injini Ulwelo
Iisilinda (q.ty) 3
Isantya senjini (50/60Hz) 1500/1800rpm
Isiqulatho solwelo(110%) √
IAlternator (KVA / V / Hz) 8/220/50-8/240/60
Isokethi yokuphuma (KVA / V / Hz) 3/220/50-3/240/60
Uxinzelelo lwesandi 67 dB(A)@7m
Ukumelana nesantya somoya 80km/h
Umthamo wetanki 130l
Inqaba yokuKhanya kwesibane esiLed
I-Fuzhou Brighter Electromechanical Co., Ltd.
Fumana i-imeyile ngamaxesha athile kuBrighter.
Asisoze sabelane okanye sithengise iinkcukacha zakho zoqhagamshelwano.